Sirilaanka: Tirada dadka ku dhintay Qaraxyadii Lagu Weeraray Kaniisadaha iyo Hoteelada oo sii korortay • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Sirilaanka: Tirada dadka ku dhintay Qaraxyadii Lagu Weeraray Kaniisadaha iyo Hoteelada oo sii korortay
Booliiska wadadanka Sirilaanka ayaa xirxiray tiro dad ah oo la xiriirinayo sideed qarax oo xiriir ahaa oo lagu weeraray kaniisado iyo hoteelo kuwa raaxada ah, xili lagu jiray ciidamada Easterka ee diinta Masiixiga.
Tirada dadka ku dhintay Qaraxyadaasi ayaa la rumaysan yahay inay kor u dhaafeen ilaa 290 qof, halka dhaawacuna uu ka badan yahay 500 qof. Dadka dhintay waxaa ka mid ah muwaadiniin u dhashay wadamada Ingiriiska, Maraykanka, Turkiga, Hindiya, Shiinaha, Demarka, Holland iyo Portiqiiska, kuwasoo tiradooda lagu sheegay 32 qof
Dhinaca kale, saddex ka tirsan booliiska ayaa geeriyooday ka dib markii ciidamadu ay weerareen guri ku yaal caasimadda, halkaasi oo uu ka dhacay qaraxyo iyo dagaal saacado socday
Waxaa la qaaday xaaladii deg dega ahayd ee shalay lagu soo rogay Caasimadda wadankaasi ee Colombo iyo magaalooyinka kale ee Negombo iyo Battcicaloa.
Ma jirto koox ama cid sheegatay masuuliyada weeraradaasi khasaaraha badan dhaliyay. Ra’isul Wasaaraha wadankaasi Wickremesinghe ayaa warbaahinta u sheegay in dhamaan dadka la qabqabtay ay yihiin kuwo u dhashay wadankaasi, isagoo aan meesha ka saarin suurtagalnimada in dad ajaaniib ah ku lug leeyihiin qaraxyada.
Jasiirada Srilanka oo ku taal koonfurta qaarada Aaasiya oo tirada dadkooda lagu qiyaaso 22 Milyan ayaa 70% waxay haystaan diinta Buudaha, Muslimiinta dalkaasi ku nool waxaa lagu qiyaasaa 10% , halka Hinduuga ay yihiin 13%. Sidoo kale Kirishtaanka ku nool ay lagu sheegay 7%
Sirilaanka ayaa ka soo kabanaysay dagaal sokeeye oo wadankaasi ka socday 26 sanadood, kaasi oo soo gabagaboobay 2009 markii xoog lagu muquuniyay Jabhadii qowmiyada Shabeelada Tamiilka oo doonayay inay samaystaan wadan iyaga u gaar ah, ilaa 100,000 kun qof ayaa ku dhintay dagaalkaasi.